Galaxy S10 gafere ule ntachi obi nke JerryRigEverything | Gam akporosis
Galaxy S10 na-anwale ule ntachi obi kachasị ewu ewu
Naanị ihe karịrị otu izu gara aga, e gosipụtara Galaxy S10, nke anyị na-agwa gị ihe niile. Mbido ọrụ nke ọkwa a ga-ewere ọnọdụ na Machị 8th n'ụwa niile. Mana tupu igba egbe a ị ga - ahụrịrị ma anyị na - eche ekwentị na - eguzogide ọgwụ. N'ihi na ihe nlereanya nke na-enye aha ya nso nwere edobanyelarịrị ule JerryRigEnwale ọ bụla.
Ka anyị wee hụ ma ọ bụrụ na Galaxy S10 a nwere ike ịgafe ule ntachi obi a. Karịsịa na ihuenyo, nke akara ihe mkpisiaka akara aka, bụ akụkụ dị oke mkpa na njedebe dị elu. Ọ bụ ezie na ọ dị ka Samsung arụ ọrụ na nke a, dika ekpughere n'izu a.
Dị ka ọ dị na mbụ, ekwentị na-enweta otu ule ahụ dị ka ụdị ndị ọzọ na ule a. Ya mere, ị na-amalite site na ịchụrụ ihuenyo, n'akụkụ na azụ nke Galaxy S10, mgbe ahụ na ihuenyo ahụ na-enwu ọkụ na n'ikpeazụ ị na-anwa ịgbada ekwentị ahụ. Nnwale na-achọsi ike, nke na-etinye njedebe a sitere na Samsunf ka ọ nwalee.
Na akụkụ mbụ nke ule anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Samsung ejiriwo nlekọta na-eguzogide ya nke ọma, karịsịa na-eche na e wuru ihe mmetụta ahụ n'ime ya. Ihuenyo ahụ adịghị mfe ọkọ na ihe mmetụta adịghị emebi. Ma na kamera ọ ga-ekwe omume ịmepụta mmebi. Mgbe anyị gbara ihuenyo, anyị nwere ike ịhụ na enweghi akara ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ọ bụ akụkụ ikpeazụ nke ule ahụ na-eme ka ọtụtụ nwee mmasị na ụjọ. N'ihi na anyị na-aga n'ihu ịgbanye Galaxy S10 a, iji hụ ma ọ ga - enwe ike iguzogide akụkụ a. Dị ka ọ dị na mbụ na ụdị Samsung, e wuru ya n'ụzọ siri ike. N'ihi na ọ dịghị ihe na-eme. Ọ naghị agbaji ma ọ nweghị akụkụ ga-atọpụ ma ọ bụ nwee mgbape.
Yabụ, enwere ike ịsị nke ahụ n'enweghị nsogbu Galaxy S10 a agafeela ule JerryRigEnwale zuru oke. Ozi ọma maka ndị nwere mmasị na njedebe nke Samsung, ndị na-ahụ otu o si bụrụ ihe nlele na-eguzogide ọgwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Galaxy S10 na-anwale ule ntachi obi kachasị ewu ewu
Mpempe akwụkwọ Google karịrị nde nbudata 500
Google Play na-emelite na ọhụrụ mmegharị na echiche iyo